Sidee loo kaydiyaa IMEI-ka Android-kaaga | Androidsis
Francisco Ruiz | | Xididka Android, Codsiyada Android, Amniga, Tababarada
Casharro kale oo wax ku ool ah oo aan sameeyay wax yar ka hor, waxaan ku baray adiga TWRP Soo Celinta, sida loo kaydiyo galka 'EFS', ama maxaa isku mid ah, a keydinta IMEI ee xaruntaada Android si fudud loo ilaaliyo loona soo celiyo haddii ay dhacdo IMEI lumis.
Markan waxaan kuu sharaxayaa isla nidaamka laakiin iyada oo aan la isticmaalin habka Soo-kabashada ee la beddelay, kaliya leh terminaal xididaysan iyo codsi bilaash ah oo aan si toos ah uga soo dejisan karno Google Play Store waxaan haysan doonnaa wax ka badan intii nagu filan.
Codsiga su'aashu waxay ka jawaabaysaa magaca EFS ☆ IMEI ☆ Kaabta Iyo sidaan kuu sheegay, waxaan awoodi doonnaa inaan ka helno gebi ahaanba mid bilaash ah dukaanka rasmiga ah ee Google ee loogu talagalay Android.
Maxay u leeyihiin gurmad ama keyd IMEI-ka koxdeenna Android?
Kaydinta ama keydinta IMEI ee xaruntaada Android Gabi ahaanba waa lagama maarmaan, gaar ahaan dhammaan kuwa isticmaala kuwa jecel inay isku dayaan Roms cusub oo la kariyey ama lagu rakibo dekedo codsiyada iyada oo loo marayo dib u habeynta kor ku xusan. IMEI-ka terminal-keena Android wuxuu ku jiraa galka ama nidaamka xijaab magacaabay EFS taasi waxaa laga heli karaa meelo kala duwan iyadoo kuxiran astaanta ama qaabka loo yaqaan "terminal Android".
At boosteejada Samsung galkaan waa qayb si toos ah ugu yaal xididka nidaamka, inkasta oo boosteejooyinka sida LG ama Sony ay bedesho goobtani. Baro sida hubi IMEI on Samsung linkiga aan hada kaaga tagay.
Nuqul keyd ah IMEI Waa lagama maarmaan in lagu sameeyo bartaada internetka ee Android, sababtoo ah haddii aan shil u lumino xogtaan ama aan tirtirno, macquul ma ahan inaan iska diiwaangelino shabakad kasta oo moobayl ah oo adduunka ah, taasoo ka dhigeysa qalabkeenna mid aan waxtar lahayn marka la eego isku xirnaanta xogta, wicitaanada iyo fariimaha.
cunt EFS ☆ IMEI ☆ Kaabta waxaan awood u yeelan doonnaa inaan fulino a IMEI gurmad ka mid ah Android ka interface ka fudud ee codsiga oo kaliya adigoo riixaya badhan fudud, ugu yaraan Samsung terminals, In boosteejada kale ee ay noqon doontaa lagama maarmaan in la soo galo ikhtiyaarka qoruhu Xulashada iyo dooran qaybta ah EFS halkaas.
Sidee ku hubin kartaa sawirka korkiisa laftiisa, marka laga reebo inaad haysato suurtogalnimada samee nuqul IMEI-ka Android-keena, sidoo kale waxay na siineysaa ikhtiyaarka aan ku dooran karno riixo ama aan ku qabanno a gurmad kasta oo Risaalo nidaamka faylasha ka socda Android-keena.
Codsi aad u xiiso badan oo halkan ka socda Androidsis Aad ayaanu kugula talineynaa, waana taas Wax qiimo ah kuma fadhido inaan iska bogsano caafimaadkeena si aynaan mar dambe uga qoomamaynin, gaar ahaan dadka isticmaala ROOT iyo kuwa u heellan inay ka shaashadaan barnaamijkeenna Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xididka Android » Sida loo sameeyo keyd IMEI-ka boosteejadaada si aad u fudud [ROOT USERS]
Aad u faa'iido badan, mahadsanid Francisco.
Mahadsanid, waxaan rajaynayaa inaanan dib u soo celin iyaga: 3
Jawaab José Angel